China Soft PVC Uziphu Ukutsala mveliso kunye nabenzi | SJJ
I-Soft PVC Zipper Pullers yenye yeemveliso eziphambili ezivela kwiZipho eziMnandi eziMenyezelayo. I-PVC Zipper Pullers ezithambileyo zenziwe nge-die cast technical kwi-2D okanye i-3D yokugqiba, ukuzisa iilogo zakho kunye noyilo oludlamkileyo kwizinto ezincinci.
I-Soft PVC ye-zipper pullers enye yeemveliso eziphambili ezivela kwiZipho eziMnandi. Iipaji zesiko ezenziwe ngesiko zenziwe kukufa kwe-2D okanye ukugqitywa kwe-3D, ukuzisa iilogo zakho kunye noyilo olunomdla kwizinto ezincinci. Abantu abanakho ukusebenzisa iiplagi ezithambileyo ze-PVC kungekuphela kwizixhobo zabo, kodwa nakwiingxowa, iisutikheyisi, iminqwazi, iithegi eziphambili, kunye nezinye ezisebenzisa iiziphu. Zonke iinkcukacha zingenziwa ngokwezifiso, iimilo eziguqukayo kunye neelogo ezimibalabala zenza izinto ezimileyo zicace ngakumbi kwaye zinomtsalane, zibonisa ii-brand zakho, izimvo zakho kunye nomxholo wakho ngezinto ezilula.
Kunye nexesha lokubhabha, abantu abaninzi ngakumbi bayakhathala malunga neengxaki zokusingqongileyo. Ii-zip zethu ze-PVC ezithambileyo zenziwe ngezinto ezinobuhlobo zokupasa imigangatho yovavanyo evela e-US okanye kumaziko aseYurophu, ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo kubathengi bethu.
Ukhetho oluQhoboshelweyo oluqhelekileyo: umlobothi, umtya, iringi ephambili okanye ukusayina ngabathengi
Egqithileyo Iimpawu zeMpahla ye-PVC ethambileyo
Okulandelayo: Iibheji zePinki zePVC ezithambileyo
Abaqhubi be-zip ngokwezifiso
Isitshixo seZipper esiqhelekileyo
Tsala uziphu Tsala
Ukutsalwa kwe-Zipper ye-PVC
I-Zipper Slider kunye nePuller